Rahoviana no hanomboka ny lamasinina? | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Rahoviana no hanomboka ny lamasinina?
19 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline, TORKIA
rahoviana no manomboka ny fiaran-dalamby
TCDD Tasimacilik dia mikasa ny hanangana indray ny High Speed ​​Train (YHT), seranam-piaramanidina sy serivisy fiaran-dalamby, izay naato noho ny fipoahan'ny coronavirus, tamin'ny volana jona raha tsy misy fiovana.
Ny fitsipika sasany dia nampidirina ho an'ny "vanim-potoana tetezamita". Raha arak'izay, ny mpandeha dia mitondra mpandeha manana fahaiza-manao 50 isan-jato. Ny mpandeha tsy misy fotika dia tsy entina nidina anaty lamasinina. Hahazo tapakila mialoha ny mpandeha. Eo amin'ny seza novidian'izy ireo ihany no hipetraka. Tsy afa-mandeha amin'ny seza hafa izy. Tsy misy fiovana amin'ny vidin'ny tapakila. Hisy otrikaretina amin'ny lamasinina.
Ireto ny fitsipika vaovao hapetraka amin'ny lamasinina
Ny fitsipika sasany dia mihatra amin'ny "vanim-potoana tetezamita". Ireto manaraka ireto:
YHTs dia hitondra mpandeha manana fahaiza-manao 50 isan-jato.
Ny mpandeha tsy misy fotika dia tsy entina nidina anaty lamasinina. Tsy maintsy ho tonga saron-tava ireo mpandeha.
Hahazo tapakila mialoha ny mpandeha. Eo amin'ny seza novidian'izy ireo ihany no hipetraka. Tsy afa-mandeha amin'ny seza hafa izy.
Tsy misy fiovana amin'ny vidin'ny tapakila.
Ny fiaran-dalamby dia hatao sorona.
Ny fiaran-dalamby dia hanana seza tsy misy fotony ho an'ny fahasalamana ao ambadiky ny sarety
“Ireo fiaran-dalamby dia hiasa amin'ny fahafaha-50 isan-jatony. Hisy seza tsy misy ho an'ny fahasalamana ao ambadika. Ilaina ny fanohanana ara-bola sy psikôlôjia mba hahatonga ny olom-pirenena ho zatra amin'ny vanim-potoana vaovao. Tsy maintsy manao sorona mba hamerenana azy ireo. Raha ny fitantaran'ny fikarohana, ny zotram-piaramanidina dia tsy afaka misambotra ny volana janoary na dia amin'ity taom-pilalaovana ity aza. Misy sarina mitovy amin'ny lamasinina. Hiaina ankehitriny ny fiainan'ny firenena.
Nambarany fa nilahatra ny seza misy ny lamasinina mba hanitsiana ny elanelana misy eo amin'ireo seza arakaraka ny fanovana ny fitsipi-piarahamonina ara-tsosialy taorian'ny fizotran'ny YHT Coranavirus izay tantanan'i TCDD Taşımacık AŞ. Ny varotra tapakila ho an'ny sidina YHT, izay hanomboka amin'ny tapaky ny volana jona, dia ho eo amin'ny Internet indray.
Rahoviana no hisokatra ny moske? Rahoviana no hanomboka ny fiankohofana amin'ny Moske sy Masjids?
Rahoviana i Bahikesir no hanomboka ny serivisy?
Rahoviana ny hanombohana fandaharam-potoana Blue Train
Rahoviana no hanomboka ny serivisy fiaran-dalamby Adapazarı?
Rahoviana no hanomboka ny sidina Konya-Istanbul YHT?
Rahoviana vao manomboka tram-barotra any Konya
Rahoviana no hanomboka ny sidina Istanbul Ankara YHT?
Rahoviana no hanomboka ny tetikasa Malatya High Speed ​​Train?
Rahoviana no hanomboka ny lalana Akçaabat-Düzköy
Rahoviana no hitsapana ny tsipika Marmaray?
3. oviana no hanomboka ny tetikasa seranam
Rehefa manomboka ny System Rail Rail amin'ny trabzon
Rehefa manomboka ny tram-barotra ao Samsun ao Samsun
Fahafatesana eran-tany amin'ny fiaramanidina 314 Miliara
Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? efi-efijery efijery fizahana fizahana e-Fanjakana
Ny serivisy TCDD fiaran-dalamby dia misy andalana YHT!
Çerkezköy- Hanomboka ny serivisy amin'ny alàlan'ny 19 amin'ny volana Novambra
Rahoviana no hanomboka ny fiarandalin'i Istanbul sy Ankara?
Adapazarı-İstanbul dia hanomboka amin'ny serivisy 2016
Rahoviana no hanomboka ny fandoavana ny fiantohana amin'ny asa sy ny fiantohana?
Ny serivisy amin'ny lamasinina Denizli-Eskişehir dia hanomboka amin'ny fiandohan'ny 2015
Şahin, Zonguldak-Karabük Ny dingana fampiofanana dia hanomboka amin'ny faran'ny volana